Free na idgwọ Marketing Ngwaahịa | Martech Zone
Peeji nke a na akwukwọ ozi a na - enye ngwa ahia, ihe ahia gha enyere gi aka iji Martech Zone
Dịka ụlọ ọrụ na-emejuputa ntuziaka njiri mara iji hụ na ọ na-agbanwe agbanwe n'ofe nzukọ a, ọ dịkwa oke mkpa ịzụlite olu na ụdị maka nzukọ gị ka ọ na-agbanwe agbanwe na ozi ya. Olu ika gị dị mkpa iji kpakọrịta ndịiche gị nke ọma yana ịgwa ndị na-ege gị ntị okwu ozugbo na mmetụta mmetụta uche. Kedu ihe bụ ntuziaka olu na ụdị? Ọ bụ ezie na ntuziaka akara ngosi na-elekwasị anya na akara ngosi, mkpụrụedemede, agba, na ụdị ọhụụ ndị ọzọ, olu
Inwe usoro mgbasa ozi nke ọma na akpaaka bụ ihe dị oke mkpa nke saịtị e-azụmahịa ọ bụla. Enwere omume 6 dị mkpa nke atụmatụ azụmaahịa e-azụmahịa ọ bụla ga-etinyerịrị n'ihe gbasara izi ozi: Zụlite Ndepụta Gị - Na-agbakwunye mbelata nnabata, mmeri-na-emeri, mbupụ, na mbupụ-ebumnobi mkpọsa iji too ndepụta gị wee nye a onyinye na-adọrọ adọrọ dị oke mkpa maka ịzụlite kọntaktị gị. Mgbasa ozi - Izipu ozi-e nnabata, akwụkwọ akụkọ na-aga n'ihu, onyinye oge, na ederede mgbasa ozi iji kwalite onyinye na